Xabsigii Nelson Mandela oo Lagu Kiraynayo $250,000 Halkii Habeen. – somalilandtoday.com
Xabsigii Nelson Mandela oo Lagu Kiraynayo $250,000 Halkii Habeen.
(SLT-South Africa)-Waxaa dalka Koonfur Afrika lagu qabtay carwo lagu kireynayo xabsigii uu mudada dheer ku xidhnaa madaxweynihii hore ee dalkaas Nelson Mandela, waxaana habeenkii lagu seexanayaa lacag dhan $250,000 ama rubuc malyuun doolar.
Hay’ad lagu magacaabo CEO Sleepout , taas oo doonaysa in ay xusto maalinta Mandela oo ku beegan 18-ka bishan .
Balse dadka degen ayaa aad u yaraanayay kadib markii ay gabaabsi noqdeen kaydkii biyaha macaanaa ee jasiiradda, waxaana loo baahday in biyo macaan looga keeno magaalada xitaa sanado ka hor intii magaalada Cape Town uusan ka dhicin qalalaasaha biyo la’aanta.
Jasiiradda waxa ay noqotay goob Hiddo-Dhawr ah oo ay aqoonsantahay hay’adda dhaqanka ee Qaramada Midoobay ee UNESCO, waxkasta oo halkaas yaalana waxaa lagu illaaliyay shuruucda Qaramada Midoobay.